DHEEGYSO-Maamulka Marka oo beeniyey in Alshabaab magaalada maamulaan. – Radio Daljir
DHEEGYSO-Maamulka Marka oo beeniyey in Alshabaab magaalada maamulaan.
Luulyo 13, 2016 4:22 b 0
(July 13 2016)-Gudoomiyaha Magaalada Marko ee Maamulka Koonfur Galbeed Somalia Xasan Cumar oo la hadlay Radio Daljir ayaa beeniyay in magaalada ay maamulaan Alshabaab.
Gudoomiyaha ayaa waxa waraysigiisa waxa uu kaga hadlay Arimo badan oo xaaladda Magaalada waxaana uu uwaramay Cumar Laki Man oo ku sugan Studiyaha Daljir ee Caabudwaaq.
DHEGEYSO-Puntland iyo Galmudug oo shacabka Galkacyo kala hadlay lashaqaynta ciidanka.